Maraoka: “Ny fotoam-pialan-tsasatro miaraka amin’ny boky” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2010 12:41 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, македонски, বাংলা, Français, srpski, عربي, English
Ao anatin'ny tontolo rakotry ny fivoaran'ny teknolojia, sady efa mihamora sy miha-mora vidy ny famakiana e-boky sy antontan-boky, mety mbola ambin-toerana ve ho an'ireo boky nosoratana fahiny? Ho an'ireo mpitoraka bilaogy Maraokana sasany, ny valinteny dia eny, ary eo ny teknolojia hanaporofo fa marina izany .
Hevitra nalefan'ireo mpitoraka bilaogy amin'ny aterineto roa herinandro lasa izay, ny Ny fotoam-pialan-tsasatro miaraka amin'ny boky mba ho sehatra ifampitorahana bilaogy [Ar] sy mba ho pejin'ny Facebook ho an'ny besinimaro [Ar], izay anasana ireo mpitsidika hizara ireo traikefany amin'ny famakiam-bokiny :
Mahazatra antsika matetika ny mandany ny fotoam-pialan-tsasatsika miaraka amin'ireo namana sy ny fianakaviana ary tsy dia miaraka loatra amin'ny boky tsara, nefa isika afaka mampiaraka izany tsara .
Eny ary, ahoana ary raha mba laniantsika amin'ny famakiam-boky ny fotoam-pialan-tsasatsika amin'ity indray mitoraka ity, amin'izay isika afaka mifanohana mba hamaky boky bebe kokoa. Tsy ilaina intsony ny mampatsiahy antsika ireo tombontsoa rehetra azo avy amin'ny famakiam-boky. Ho amin'izay tanjona izay, nanamboatra ity bilaogy ity izahay mba hanitarana ny sainao mikasika ny zavatra azonao notsoahina ao amin'ilay boky izay natoronao .
Fotoam-pialan-tsasatra miaraka amin'ny boky
Nanomboka “meme” vaovao tamin'ity herinandro ity i Marrokia, mpitoraka bilaogy [Ar] sady mpiara-manangana tamin'ny hevitra . Nanasa ireo mpitoraka bilaogy namany izy mba hizara ireo vaky boky tiany ary manontany azy ireo …
Inona avy ireo boky mbola tadidinao tamin'ny fahazazanao ?
Iza no mpanoratra tianao indrindra ?
Iza no mpanoratra izay tsy ho vakianao intsony ny asa-sorany ?
Inona avy ireo boky izay ho entinao miaraka aminao raha tsy maintsy hatoka-monina any amin'ny tany efitra ianao ?
Iza no mpanoratra izay mbola tsy novakianao nefa tsapanao fa ilainao ny mamaky ny asany ?
Inona avy ireo boky tena tianao ?
Inona ny boky vakianao amin'izao fotoana izao ?
Alefao amin'ny mpitoraka bilaogy efatra ny fanasana ary asao izy ireo hizara ireo traikefany amin'ny vaky boky ho an'ny tsirairay .
Manomboka mahazo olona ny valin'ity hevitra ity . Ity manaraka ity ny fehin'ireo valinteny sasany nalaina an-tsapaka avy amin'ny tontolon'ny bilaogy .
Ireo boky tsaroana tamin'ny fahazazana
Avy amin’ i Najat [Ar]
Ny tantaran'i Alice miriaria any An-tanimahavariana sy Tontolo andro ao amin'ivon'ny tany
Avy amin'i Young Thoughts [Ar]:
Nabil Farouk, mpanoratra izay novakiako ny ankamaroan'ireo tantara avy amin'ny horonan-tsary mihetsika mitohy The Man of the Impossible, sy Ireo Voninkazo . Efa zatra mamaky ireo tantara ara-tantara nosoratan'ny mpanoratra Georgy Zeidan aho.
Avy amin'i Marrokia:
Bokin-tantara nosoratan'i Mohamed Attia Abrashi, tantara fohy mikasika an'i Juha ary mazava ho azy ireo Anganon'i Kalila sy i Dimna.
Ireo mpanoratra tiana indrindra
Avy amin'i Young Thoughts:
Naguib Mahfouz, Ihsan Abdel Quddous, Tawfiq el-Hakim sy i Aed al-Qarni.
Avy amin'i Fouad [Ar]:
Naguib Mahfouz, Tawfiq el-Hakim, Mahmud al-Saadani, manampy an'i Zakaria Tamer, Yahya Haqqi, Mubarak Rabi’, Nabil Farouk, Afif Abdelfattah Tabarah ary farany fa tsy kely indrindra, ny mpanoratra izay nanova ny fiainako , Aed el-Qarni.
Ireo mpanoratra izay tsy ho vakianao intsony ny bokiny
Avy amin'i Abeer [Ar]:
Avy amin'i Khaled [Ar]:
Avy amin'i Fouad:
Mohamed Choukri izay maty tamin'ny 2003. Namaky ny bokiny For Bread Alone aho sy ny The Tent ary dia mbola tsy azoko mihitsy hoe fa maninona no halako izy ireo .
Ireo boky izay ho entinao raha hatoka-monina any amin'ny tany efitra ianao
Avy amin'i Mohamed:
Mbola tsy tany amin'ny tany efitra mihitsy aho aloha, fa raha tsy maintsy mankany aho, dia hitondra iPad na Kindle ary hiezaka ny tsy hitondra taratasy be mavesatra .
Noor al Yaqeen (Boky mikasika ny fiainan'ny mpaminany Mohameda sy ny fomba fanaony )
Ireo mpanoratra mbola tsy novakianao mihitsy ny asany nefa tsapanao fa mila mamaky ireo asany ianao
Avy amin'i Abdelhamid [Ar]:
Yusuf Idris sy Youssef El Sebai.
Ny lisitr'ireo boky tianao
Avy amin'i Said [Ar]:
Ireo boky rehetra nosoratan'i Abdallah Laroui
Mahdi Elmandjra sy ny Communication Dialog
A Romance in a Life's Dawn nosoratan'i Hassan Aourid
Dafna al-Madi (Ny fandevenana ny lasa ) nosoratan'i Abdelkrim Ghellab
Mirenireny eny amoron-dranon'i Nilnosoratan'i Naguib Mahfouz
Avy amin'i Saad Eddine [Ar]:
Ny hazon'ny fitomaniana nosoratan'i Taha Hussein
Ilay lehilahy vokoka an'i Notre-Dame nosoratan'i Victor Hugo
Ilay trano lehibe nosoratan'i Mohammed Dib
Ireo mpiandry ny Jiro nosoratan'i Amin Maalouf
Ireo boky izay vakianao amin'izao fotoana izao
Avy amin'i Hibo [Ar]:
Colin Wilson: Ny olona sy ny ao an-tsainy
Ilay toetra mampiavaka mahafinaritra nosoratan'i Karim al-Shazley
Ny fahatsiarovana ao anatin'ny Nofo nosoratan'i Ahlam Mosteghanemi
Ilay famantarana very nosoratan'i Dan Brown
Les voix de Marrakesh, d'Elias Canetti [ny feon'i Marrakesh]
Taratasy nosoratan’ i Abdallah Laroui
Ny feon'i Marrakesh nosoratan'i Elias Canetti
Sary nalain'i Hisham Almiraat hita ao amin'i Flickr ary nahazoana alalana tamin'ny Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 fahazoan-dalana Generic .